Fivoaran'ny valanaretina :: Nahafaty olona roa indray ny coronavirus • AoRaha
Fivoaran’ny valanaretina Nahafaty olona roa indray ny coronavirus
Marary roa, lehilahy, 42 taona, sy vehivavy, 62 taona, notsaboina tetsy amin’ny CHU Befelatanana indray no namoy ny ainy vokatry ny tsimok’aretina “Covid-19”, araka ny tatitra nataon’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny ady amin’ny Covid-19 (CCO) etsy Ivato, omaly. Samy nahitana soritr’aretina mahery vaika izy ireo.
Mitombo isa hatrany kosa ireo sitrana satria nahatratra fito amby telopolo no nivoaka ny hopitaly, taorian’ny fitsaboana. Na izany aza, tranga vaovao fito amby roapolo no nampahafantarina, omaly, ho an’ireo olona nifindran’ny tsimok’aretina.
Fantatra fa enina sisa ireo marary arahi-maso akaiky (efatra any amin’ny hopitalin’i Morafeno; iray etsy Befelatanana ary ny farany any amin’ ny hopitalin’Analakininina), satria ankoatra an’ireo nindaosin’ny fahafatesana dia olona iray no afaka tamin’ny soritr’aretina mahery vaika.
Momba an’iretsy tranga vaovao, dia fitiliana miisa fito amby sivifolo amby zato no nivoahan’ ireo marary vaovao fito amby roapolo ireo, tamin’ ny 14 jona lasa teo. Iraika amby roapolo ny olona nifindran’ny Covid-19 teto Antananarivo, ka ny dimy ambin’ ny folo no teto an-drenivohitra avokoa. Isan’ireo toerana voakasika ny teny Ambohidratrimo, Ankadivoribe, Miandrarivo, Ampefiloha, Soanerana Namontana ary Manjakaray.
Tonga any Mahajanga
Sambany kosa ny nahatiliana ny tsimok’aretina ny olona telo tany Mahajanga, ankoatra an’ireo tranga vaovao tany Toamasina. “Tany Toamasina anefa ny iraika amby telopolo amin’ireo marary sitrana, raha tetsy amin’ny hopitaly Andohatapenaka ny roa hafa”, hoy hatrany ny tatitry ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Mihenjana avy hatrany ny fampanarahana ny fepetra any an-drenivohitr’i Boeny, taorian’ izao fahatongavan’ny valanaretina any an-toerana izao. Nambaran’Andriantomanga Mokhtar Salim, Ben’ny tanànan’i Mahajanga fa: “tsy maintsy manao aron-tava avokoa ny mponin’i Mahajanga, manomboka izao. Hosaziana hamafa lalana izay tratra tsy manaraka izany”. Voalaza ho avy amin’ny fifampikasohana tamin’ny olona nitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” no nahatonga an’ireo tranga telo tany Mahajanga ireo.
Tafakatra fito ambin’ny folo sy telonjato sy arivo ny isan’ireo rehetra voaporofo fa voan’ny valanaretina, nanomboka ny 19 marsa 2020 ka hatramin’ny 14 jona 2020 teto Madagasikara. Fito ambin’ny folo sy efajato ny fitambaran’ny sitrana. Sivy amby valopolo sy valonjato kosa no manohy manaraka fitsaboana.
Fihanaky ny valanaretina Olona roa matin’ny Covid-19, zato ireo marary vaovao
Fanampiana ny sahirana Sivanina ireo olona hisitraka ny Kaly tsinjo
Fahafatesana mpanakanto Nodimandry i Bakomanga andrarezin’ny vako-drazana
Fikomiana :: Voasoroka ny fikasan’ireo marary hitsoaka tany Toamasina
Fampanarahan-dalana sy fandriampahalemana :: Depiote maromaro nihaona tamin’ny jeneraly Ravalomanana Richard